China 75% Mmanya na-egbu egbu na IBC / Drum ụlọ ọrụ na ndị nrụpụta | Zhongrong
N'okpuru mmetụta nke covid-19, 75% mmanya na-egbu egbu na-aghọ nlekọta onwe anyị dị mkpa na ndụ anyị kwa ụbọchị ọkachasị ebe ụfọdụ dị ka ụlọ akwụkwọ, ụlọ ọgwụ, nnukwu ụlọ ahịa, ụlọ nkwari akụ, wdg. Ngwaahịa a nwere 75% mmanya nke nwere ike igbu coronavirus na ndị ọzọ nje na echedo ahu ike anyi nke oma.
Na-eduga na teknụzụ ethanol na China ruo ihe karịrị afọ 20
N'okpuru mmetụta nke covid-19, 75% mmanya na-egbu egbu na-aghọ nlekọta onwe anyị dị mkpa na ndụ anyị kwa ụbọchị ọkachasị ebe ụfọdụ dị ka ụlọ akwụkwọ, ụlọ ọgwụ, nnukwu ụlọ ahịa, ụlọ nkwari akụ, wdg. Ngwaahịa a nwere 75% mmanya nke nwere ike igbu coronavirus na ndị ọzọ nje na echedo ahu ike anyi nke oma. Ngwunye Drum / IBC dị oke akụ na ụba, yana nnukwu olu, yana nkezi ọnụ ala karịa obere ngwugwu ndị ọzọ, ị nwere ike mejupụta ha n'ime obere ngwugwu ma jiri ha. Dị ka anyị na-emepụta akụrụngwa mmanya, anyị price ga-abụ nnọọ asọmpi na na elu mma. E wezụga, anyị gafere OA, FDA, na ISO nkwenye. Anyị na-ulo oru ikaNyochaa-BIO -eme ka ọ dị ka Nke 1 ika maka disinfection ngwaahịa na China dị ka anyị nwere mma mmanya kacha mma na China. Anyị bụ onye ndu na China maka teknụzụ ethanol. Anyị nwere ihe dị ka narị puku square square square 500,000 na mpaghara Hebei, China. E hiwere ụlọ ọrụ anyị na 1999. Otú ọ dị, anyị nwekwara ike ịnakwere OEM & ODM maka ụdị mmanya ọ bụla na-egbu egbu. Na-atụ anya ịbụ onye gị na ụwa ibe ma mezuo mmeri-mmeri ọnọdụ!
Mpịakọta net: 200L / 1000L
Uru: Mmanya Dabere · Environmentally Nchekwa · Triclosan Free ·
Use: Iji nyere aka wepu nje bacteria na anụahụ ma ọ bụ n’elu ihe ndị ahụ.
Direction: Naanị tinye aka, akpụkpọ ahụ na-enweghị ntụpọ ma ọ bụ n'elu ihe izugbe, ma debe ya ruo oge 1-3.
Dọ aka na ntị: Maka iji mpụga naanị · Ọ na-ere ọkụ · Na-ere ọkụ na ire ọkụ ka ụmụaka ghara iru ∙ Zere ihu na ihu, anya na anụ ahụ gbajiri agbaji.
Agaghị arụ ọrụ: Mmiri Dị Ọcha
Ozi ndị ọzọEchekwara na ebe dị jụụ na nkụ.
Kedu “nkịtị” ihe ọ na-edozi? Ọ ga-egbu corona?
Ihe kacha mma:
Daalụ maka nnukwu ajụjụ! Anyị ghọtara nke ọma ihe kpatara ị na-ajụ ajụjụ a. Ọ dị mkpa iburu n'uche na FDA akwadoghị ọgwụ ọ bụla ugbu a, gụnyere ndị na-edozi ahụ, iji gbochie ma ọ bụ mesoo covid-19. Anyị na-eburu ibu ọrụ anyị iji hụ na ndị ahịa na-aga ebe kwesịrị ekwesị maka ụdị ozi a, ụfọdụ ndị ọkachamara China gosipụtara na 75% Mmanya na-aba n'anya nwere ike ịbanye na mkpuchi nke covid-19 ma mee ka protein ya sie ike iji mebie ya.
Ndewo, olee otu ị ga-esi nweta mgbapụta ahụ? Anyị zụtara karama mana anyị chere na mgbapụta ahụ nwere ike inwe ntụpọ. Enwere ụzọ pụrụ iche iji mee ka ọ rụọ ọrụ?
Daalụ maka iru TECH-BIO 75% Mmanya Na-egbu Mmanya! Gbalịa pịa mkpịsị aka gị na mgbapụta ahụ, mgbapụta ahụ kwesịrị ịgbapụta.
Kedu maka ngwugwu ahụ?
Anyị nwere ike ịme 200L drum ma ọ bụ 1000L IBC dị ka ngwugwu buru ibu maka 75% Mmanya na-egbu egbu, ọ ga-adịrị ụfọdụ ndị na-ebugharị akwụkwọ ụgwọ iji wepụta obere ngwugwu.
Nke gara aga: 1,6-Hexanediol
Osote: 50ml 75% Mmanya Na-egbu Mgbu TECH-BIO